Mandrosoa ao anaty farihy mavokely, Lake Hillier | Fitsangatsanganana tanteraka
Mandrosoa ao anaty farihy mavokely, Lake Hillier
Isabel | | Aostralia
Sary | Wallpapercave
Planet Earth dia toerana mahavariana izay tsy mitsahatra ny manaitra antsika. Fantatrao ve fa any Aostralia dia misy farihy manana rano mavokely mamiratra? Izy io dia ny Lake Hillier, farihy iray fiaviana miafina ao amin'ny Nosy afovoany, nosy lehibe indrindra ao amin'ny nosin'i Aostralia ao La Recherche.
Tsy mora ny fidirana amin'ny toerana misy ny Lake Hillier. Tsy dia maro ny olona no nanana ny fahitana azy manokana satria noho ny antony fiarovana ny tontolo iainana dia tsy maintsy manidina manerana ny nosy ianao raha ny fahitana ny farihy mitaingina angidimby izay miala isan'andro amin'ny seranam-piaramanidina Esperance.
Raha amin'ny ho avy dia te-hitsangatsangana any Aostralia ianao hahafantatra ireo lafika mahafinaritra, ny natiora sy ny toerana misy azy tsy manam-paharoa Lake HillierAvy eo dia holazaiko anao amin'ny an-tsipiriany ny zava-drehetra momba ity laguna mavokely tsara tarehy ity.
1 Inona ny Lake Hillier?
2 Iza no nahita ny Farihin'i Hillier?
3 Ahoana no nahitana ny Farihy Hillier?
4 Fa maninona no mavokely ny rano ao amin'ny Farihy Hillier?
5 Ahoana ny fitsidihana ny Lake Hillier?
6 Farihy hafa tsy manam-paharoa eto amin'izao tontolo izao
6.1 Lake of the Clicos (Espana)
6.2 Farihy Kelimutu (Indonezia)
6.3 Farihy Moraine (Kanada)
Inona ny Lake Hillier?
Ny farihin'i Hillier dia farihy mavokely 600 metatra lava ao amin'ny Nosy Afovoany, ny nosy lehibe indrindra ao amin'ny nosy La Recherche any Western Australia, amin'ny faritra ala mikitroka sarotra idirana. Nanjary nalaza eran'izao tontolo izao izy noho ny lokony tsy manam-paharoa amin'ny ranony, izay mahatonga azy io ho azo sary. Traikefa an-tsary mahatalanjona!
Sary | Mandehana mianatra Australia
Iza no nahita ny Farihin'i Hillier?
Ny fahitana ny Lake Hillier any Aostralia nataon'ilay mpanao sary sy mpikaroka anglisy anglisy Flinders tamin'ny taonjato faha-XVIII. Mpikaroka iray izay nanjary nalaza noho izy voalohany nitety ny nosy lehibe Australie ary mpanoratra ny literatiora fikarohana, izay natokana ho an'i Oceania. Kaontinanta iray izay ao anatiny no misy ny fampitahana faran'izay henjana indrindra sy tsara indrindra eto an-tany.
Ahoana no nahitana ny Farihy Hillier?
Tamin'ny andron'ny dia nankany Middle Island, Nanapa-kevitra ny hiakatra amin'ny tampon'isa avo indrindra i Flinders hahafahany manadihady ny manodidina. Tamin'izay fotoana izay no nahagaga azy ilay sary tsy mampino niseho teo imasony: ny farihy mavokely mamirapiratra voahodidin'ny fasika sy ala mikitroka.
Mpikaroka iray hafa tsy mataho-tody, kapitenin'ilay sambo mpitsangatsangana, John Thistle, tsy nisalasala nanantona ny farihy mihitsy mba hahitana raha tena izy ny zavatra hitany na vokany optika. Rehefa nanatona izy dia gaga be ary tsy nisalasala makà santionany amin'ny rano avy ao amin'ny Lake Hillier mba hampisehoana izany amin'ny namanao sisa. Mbola nitahiry ny loko mavokely bubblegum tsy hay hadinoina na dia ivelan'ny farihy aza. Inona no dikan'izany?
Fa maninona no mavokely ny rano ao amin'ny Farihy Hillier?
Mistery lehibe an'ny Lake Hillier izany Tsy nisy nahavita nanambara 100% no antony mahatonga ny rano ny mavokely. Ny ankamaroan'ny mpikaroka dia mieritreritra fa manana an'io loko io ny dobo noho ny bakteria ao amin'ny hoditry ny sira. Ny sasany kosa milaza fa ny antony dia ny fifangaroan'ny Halobactoria sy Dunaliella salina. Amin'io lafiny io dia mbola tsy misy marimaritra iraisana ka mijanona ho enigma ny antony.
Ahoana ny fitsidihana ny Lake Hillier?
Nolazaina fa ny Lake Hillier dia miorina ao amin'ny Middle Island, ilay nosy lehibe indrindra ao amin'ny nosin'i Aostralia ao La Recherche. Satria sarotra be ny fidirana, Ny fitsidihana an'io farihy io dia tsy vitan'ny manidina amin'ny faritra amin'ny alàlan'ny angidimby avy any amin'ny seranam-piaramanidina Esperance. Izy io dia hetsika lafo vidy, nefa koa manana traikefa.
Farihy hafa tsy manam-paharoa eto amin'izao tontolo izao
Sary | Rauletemunoz ho an'ny Wikipedia
Ny farihy toa an'i Michigan, Titicaca, Tanganyika, Victoria na Baikal dia sasany amin'ireo farihy malaza indrindra eto an-tany.
Na izany aza, amin'ny kaontinanta rehetra dia misy fifantohana rano tsy dia fantatra loatra izay mamirapiratra ihany koa miaraka amin'ny hazavany manokana noho ny toetrany tany am-boalohany, na noho ny firafitry ny ranony, ny fiasan'ny maripana ambony amin'izy ireo na ireo zavamiaina monina ao aminy. Araka izany, Manodidina ny planeta dia misy farihy mahafinaritra misy loko isan-karazany izay mendrika hitsidihana.
Any Espana koa dia misy farihy tena hafahafa mitovy amin'i Hillier fa ny ranony tsy mavokely mamirapiratra fa maitso emeraoda. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe Lake of the Clicos ary miorina amin'ny morontsiraka andrefan'ny tanànan'i Yaiza (Tenerife) ao anatin'ny valan-javaboahary Los Volcanes.
Ny mampiavaka an'io lagoon io dia ny loko maitso amin'ny ranony noho ny fisian'ny zavamanana zavamaniry marobe mihantona. Ny farihin'i Clicos dia misaraka amin'ny ranomasina amin'ny morontsiraka fasika ary mifandray aminy amin'ny triatra ambanin'ny tany. Faritra arovana izy io ka tsy avela hilomano.
Any Indonezia dia misy toerana fantatra amin'ny anarana hoe nosy Flores izay misy ny Volkano Kelimutu, izay misy farihy telo izay miova loko ny ranony: avy amin'ny turquoise ka hatramin'ny mena amin'ny manga sy volontany. Mampino marina? Trangan-javatra mendrika jerena hita izany izay mitranga noho ny fitambaran'ny entona sy etona mivoaka avy ao afovoan'ny volkano ary mamokatra fanehoan-kevitra simika samihafa rehefa avo ny mari-pana.
Na dia volkano mavitrika aza ny fipoahana farany tao Kelimutu dia tamin'ny 1968. Tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX dia nambara ho valan-javaboary ao Indonezia ny tontolony.
Ao amin'ny valan-javaboahary Banff National any Alberta dia ny farihin'i Moraine, farihy tsara tarehy nipoitra avy amin'ny glacial, izay nisy rano mangatsiaka be avy tany anaty rano.
Tena mahavariana tokoa ny tontolo voajanahariny satria voahodidin'ny tampon'ny havoana goavambe any amin'ny lohasahan'ny tendrontany folo izy. Miaraka amin'ireo fahazoan-dàlana ireo dia misy olona marobe mitsangantsangana mankao amin'ny farihin'i Moraine mba hijery ny fomba fijery. Mamirapiratra bebe kokoa ny ranony mandritra ny andro, raha ny masoandro no mamely ny farihy toro-hevitra ny mandeha mialoha ny maraina hijerena azy, rehefa toa mangarahara kokoa ny rano ary hita taratra ny endrika kanto nandrafetana azy.
Ankoatra ny farihy moraineAo amin'ilay Parc National Banff ihany no misy ny farihy Peyton sy Louise, tsara tarehy ihany koa.
Any amin'ny sisintany manelanelana an'i Tanzania sy Kenya, Farihy Natron Izy io dia farihy iray misy rano sira tsy mihetsika, eo ambonin'ny Lohasahan'i Great Rift. Noho ny gazy karbonika sy ny fitrandrahana mineraly hafa izay mikoriana mankao amin'ny farihy avy any amin'ny tendrombohitra manodidina, ny rano alkaliany dia manana mari-pahaizana 10.5 mahery noho ny karbonatan'ny sodium sy ny mineraly hafa.
Rano kaodika toy izany izy io ka mety hiteraka fahamaizana be eo amin'ny maso sy ny hoditry ny biby manatona azy, izay mety maty noho ny fanapoizinana. Araka izany, ny farihy Natron Nitsangana niaraka tamin'ny anaram-boninahitra farany maty tany amin'ny firenena izy.
Fa kosa ny fisehoany ivelany, ity lokon-dranomasina ity dia mahazo loko mena na mavokely tsy manam-paharoa, indraindray aza ny voasary any amin'ny faritra ambany, noho ny zavamiaina bitika izay miaina ao anaty crust noforonin'ny sira alkaly. Mahagaga!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Mandrosoa ao anaty farihy mavokely, Lake Hillier
Fikolokoloana sy fikolokoloana vatana any Gresy fahizay